Ny misterin’ny niandohan’ny anaran’ny tanàna Armenia tao Kôlômbia · Global Voices teny Malagasy
Teoria marobe momba ny fiavian'ny anaran'i Armenia. Iza no ekena?
MpanoratraKelly Chaib De Mares
Nandika (fr) i Charlène Brault
Voadika ny 08 Avrily 2022 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, Italiano, русский, عربي, 日本語, Français, Español
Armenia, Quindío, Kôlômbia. Sary an'i Luis Alveart/Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)
[Raha tsy misy filazàna hafa, mitondra mankany amina tranonkala amin'ny fiteny espaniôla avokoa ireo rohy rehetra]
Manerana ny tanibe amerikana rehetra, mahazatra ny mahita an'ireo tanàna manana anarana eorôpeana, saingy iray hafa no niteraka resabe: Armenia ao Kôlômbia. Teboka jeografika miisa 43 no mitondra ny anarana “Armenia”, nefa ny renivohitry ny departemanta ao Quindio no nanome toerana an'ireo karazana tombatombana rehetra mikasika ireo antony nanolorana an'io anarana io.
Ao anaty eritreritra iraisana nasionaly, ny anarana Armenia dia fahatsiarovana an'ireo armeniana niharamboina tamin'ny Fanjakana Otômàna. Ho setrin'izay, raha vao misy vahiny iray mahalala ny fisian'ny tanàna antsoina hoe Armenia ao Kôlômbia, tonga izy dia mihevitra fa izany dia vokatry ny fisian'ireo diaspora na avy amin'ireo mpanjanaka azy. Saingy ireo manampahaizana manamarina fa tsy misy marinana iray aza amin'ireo teoria ireo.
Ny tanànan'i Armenia ao Kôlômbia, ivon'ity resabe ity, dia miorina eo akaikin'ny tandavan-tendrombohitra afovoan'i Andes Kôlômbiàna, 290 kilometatra andrefan'i Bogotá. Ahitana mponina miisa manodidina ny 300 000 izy io ary misitraka maripàna mahafinaritra 20°C mandritra ny taona. Talohan'ny fanjanahantany Espaniôla, izy no faritany fototra nahitàna ny sivilizasiona Quimbaya izay efa nanjavona. Taorian'ny nanorenan'ireo Espaniôla azy, ny tanàna no ivon'ny fihazakazahana haka kafe kôlômbiana, izay naharitra hatramin'ny fiafaran'ny taonjato faha-XX.
Mpamboly tarihana saretin'ampondra. Nahazoana alalana avy amin'i Carlos Alberto Castrillón
Manana tantara tena hafa noho i Armenia an'i Kôkazy Atsimo mihitsy ity Armenia ity. Miorina eo anelanelan'ireo tandavan-tendrombohitr'i Eorôpa sy Azia ity firenena ity. Firenana iray teo ambany vahohon'ireo ampira samihafa (Otômàna, Persiàna ary Rosiàna) ireo Armeniàna nandritra an'ireo taonjato maro, izay nahavita nitahiry ny maha-izy azy noho ny fiteniny efa an'arivo taona, ny fanekena mialoha be ny fivavahana kristianina ary, vao haingana, noho ny tolona ho an'ny fanekena ny fandripahana izay nihatra tamin'izy ireo.
Famonoana sy fandroahana Armeniàna iray tapitrisa, nataon'ny ampira Otômàna nandritra ny Ady Lehibe Voalohany, no tondroin'ilay fandripahana Armeniàna. Firenena 30 mahery no manaiky ny nisian'ny fandripahana. Tiorkia, ilay firenena izay hita ankehitriny ao amin'ny faritanin'ny ampira Otômàna fahiny, dia tsy nanaiky velively hoe fanafoanana tsotra izao an'io firenena io izany, amin'ny filazàna fa hetsika ara-dalàna ny fametrahana indray amin'ny toerany ireo Armeniàna ilay nataon'ny Fanjakana ho valin'ny fihetsiketsehana revolisionera Armeniàna, izay nandrahona ny ampira nandritra ny ady. Na dia tsy nanaiky aza i Kôlômbia, tamin'ny taona 2017 ny tanàna an'i Armenia dia namoaka didy ho fahatsiarovana ny fahazato taonan'ilay fandripahana.
Tsy namela handalo fotsiny ilay fotoana nahafahany nilaza ny fisian'ity tanàna Kôlômbiana ity tamin'ireo mpiray tanindrazana taminy mihitsy ireo mpahay tantara sy ireo media armeniàna. Ohatra, ny Armeniàna mpahay tantara, Hovhannès Babesian, dia nanoratra tany am-boalohany fa: “tamin'ny taonjato faha-XIX, vondrona armeniàna mpifindra monina no nanorina ny tanàna”.
Nohamafisin'i Sabundjián, mpahay tantara iray hafa, ity teorian'ny Armeniàna ity, izay, tamin'ny taona 1983, dia nilaza fa nisy tsangambato iray natsangana “ho fahatsiarovana ireo mpanorina ny tanàna sy ireo maritiora mpiray tanindrazana aminy.” Taty aoriana, lasa lavidavitra kokoa ny gazetin'i Erevan tamin'ny famoahana fa : “tsangambato maneho an'ireo Armeniàna niharam-boina tamin'ny taona 1896 izy io”. Manondro an'ohatra ilay tsangambaton'ireo mpanorina izy ireny, izay mipetraka ao anatin'ilay valanjavaboahary mitovy anarana aminy ihany, ahitana famaky, mariky ny asan'ireo Antiochiens nanorina ny tanàna tamin'ny alalan'ny fanapahana ny ala mikitroka.
Tsangambato ho an'ireo mpanorina, ao Armenia, Kôlômbia. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe
Azo takarina ny fiheverana ho fisian'ny diasporà Armeniàna iray ao Kôlômbia. Nitarika fiforonana diasporà iray lehibe kokoa erantany taorian'ny an'ireo Jiosy, ny fandroahana mahery vaika na ny fahafatesana kristianina Armeniana efa ho iray manontolo, nonina tao amin'ny ampira Otômàna. Vinaniana ho manodidina ny telo tapitrisa ireo Armeniàna monina ao amin'ny Repoblikan'i Armenia ankehitriny sy ao amin'ny faritanin'i Haut-Karabakh, raha toa ka miparitaka erantany ny folo tapitrisa hafa.
Vokatr'izay, andiana fifindràmonina Armeniàna marobe nankany Amerika latina no voarakitra nanomboka ny taonjato faha-XIX ary ny ankamaroan'izy ireo dia nandositra ilay fandripahana avokoa. I Arzantina no mampiantrano diasporà lehibe indrindra ao amin'ny faritra, ahitana Armeniàna manodidina ny 150 000, fa ny fifandraisana nisongadina indrindra dia ny fiarahana tamin'i Orogoay, firenena voalohany nanaiky ny fisian'ilay fandripahana Armeniàna. Tsy nisy diasporà Armeniàna mihitsy nipetraka tao Kôlômbia ; mifanohitra amin'izay, tamin'ny alalan'ny didim-panjakana tamin'ny taona 1937, tsy navela niditra tao amin'ny firenena ireo manana ireto zom-pirenena maromaro ireto, dia ireo manana pasipaoro Ejipsiana, Grika, Bolgara, Romaniàna, Rosiàna, Siriàna ary Tiorka. Taty aoriana, tamin'ny taona 1954, nitsidika tao Kôlômbia ny eveka Armeniàna Cirillo Zohrabian ary nahita fa “manerana an'i Kôlômbia, tsy misy mihitsy na dia aloka Armeniàna iray aza”.
Tsy avy amin'ny fiavian'ireo mpanorina azy ny fiavian'ny anarana tanàna Armenia ao Kôlômbia. Ny fantatra dia niorina tamin'ny 14 oktobra 1889 ny tanànan'i Armenia, naorin'ireo mpanjanaka avy tamin'ny Fanjakana taloha tao Antioquia, izay nanangana an'ireo vohitra kely eo amin'io toerana manelanelana ny Atsinanana sy Andrefan'i Kôlômbia io, mba hitady tany mamokatra, hahafahana mitrandraka “caoutchouc” sy ny filàn-dry zareo manalavitra ny sahan'ady an-trano tamin'ny taona 1876-1899.
Fanomezam-boninahitra ho an'ny vahoaka Armeniàna sa resaka tsy loa-body ara-pivavahana?
Tamin'ny 1986, ny fandripahana Armeniàna maherin'ny 300 000 tamina vanimpotoana izay ny Federasiona revolisionera Armeniàna, nantsoina ihany koa hoe Dashnaktsutyun, dia nanohana ny fisian'i Armenia malalaka, mahaleotena ary iray tsy mivaky, na farafaharatsiny, ny fizakantena goavana kokoa sy fiarovana ny zon-dry zareo amin'ny maha-vitsy an'isa azy ao anaty ampira Otômàna, dia nahatezitra an'izao tontolo izao. Kanefa, ny fanorenana ny tanànan'i Armenia ao Kôlômbia dia efa nisy, efa ho folo taona talohan'ireo zava-nitranga ireo ary roapolo taona talohan'ilay fandripahana.
Mba hanohanana an'ity teoria ity, manamafy ny mpahay tantara, Miguel Ángel Rojas Arias, avy ao Quindío, fa “tena azo inoana fa ireo pretra tao anatin'ny asany dia niresaka momba an'i Armenia, firenena voalohany nandàla ny kristianisma ho toy ny fivavahana ofisialy, ary toerana iray fantatra ho toy ny Paradisa an-tany na sahala amin'ny seranana nidinana avy ao an-tsambofiaran'i Noa. Anarana iray izay hitoetra ao an-tsain'ireo mpanjanaka voalohany.”
Fa tsy nisy marimaritra niraisana ihany koa ny fanomezana anarana ny Fiangonana. Ny profesora, Carlos Alberto Castrillón, avy amin'ny fandaharan'asa Espaniôla sy Literatiora ao amin'ny Anjerimanontolo ao Quindío, tao anatin'ny lahatsorany “Apuntes para una toponimia del Quindío » (Fanamarihana ho an'ny fiandohana anaran-toerana iray an'ny departemantan'i Quindío), dia manamafy fa ny famokarana indray ireo anarana vahiny ao anatin'ny departementa dia nateraky ny “aura”-n'ny misitery sy ny elanelana izay manodidina an'ireo fiandohana anaran-toerana vahiny, ary koa ireo fahafahana miaina nananan'ireo mpanjanaka teo amin'ireo tany vaovao.
Fitazànana avy eny amin'ny tandavan-tendrombohitra akaikin'i Armenia, Kôlômbia. Sary an'i McKay Savage/Flickr. (CC BY 2.0)
Tao anatina tafatafa iray niarahana tamin'ny Global Voices, nilaza i Castrillón fa : “Na iray aza tamin'ireo lahatsoratra fantatra nandritra izany vanimpotoana izany, tsy nisy nilaza na inona na inona mifandraika amin'ireo fombandrazana ara-pivavahana. Rehefa manadihady ny haianarantany (vakio hoe:fanomezana anaran-toerana) lehibe ao amin'ny faritra, tsy mahita fiandohana anaran-toerana ara-pivavahana mihitsy, mifanohitra amin'izay mitranga any amin'ireo faritra hafa ao Kôlômbia. Faritana ho sahala amin'ny mpandinika malalaka sy olona nahita fianarana ireo mpanjanaka mpanorina, izay manazava ny fitobak'ireo anarana nalaina avy amin'ny literatiora na ny tantaran'izao tontolo izao.”
Tanàna iray hafa ao amin'ny departementa koa no mitondra ny anarana firenena Kôkazy iray hafa. Ny iray tamin'ireo mpanorina azy, franc-maçon fantadaza, no nanolotra hevitra hanovàna ny anarana mahazatra “La Plancha” nisaloran'ilay faritra, ho anarana iray hafahafa kokoa : Circasia.
Fa indrindra indrindra koa, tamin'ny fotoana nanorenana ny tanàna, efa nisy tao amin'ny faritra sahady ilay anarana. Voalazan'ny fifanarahana fifampivarotana momba ny tanin'ireo mpanjanaka ho miorina ao an-tanànan'i Armenia ilay tanàna. Noho izany, fintinin'i Carlos Alberto fa “Ny fampifandraisana, sahala amin'izay ataon'ny sasany, io anarana io tamin'ny tantaran'i Noa dia toa zavatra noforonin'ny saina ara-tantara fotsiny ihany na fanazavana taty aorian'ny fiandohana anaran-toerana; raha nisy ny antony ara-pivavahana tamin'io fanomezana anaran-toerana io, dia ny mba hanomezana anarana ny vohitra.”
Tsy dia fantatra loatra ny fiandohan'ny anaran'ilay vohitra nanorenana ny tanàna ; nisy fotoana nolazaina izy io fa avy amin'ireo mpanjanaka avy ao an-tanànan'i Armenia, ao amin'ny departemanta an'i Antioquia.
Noho ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana, mijanona ho mistery ireo antony nanosika ny fisafidianana ilay anaran-tanàna.
Fanamarihan'ny mpanonta lahatsoratra : ny vonomoka Armeniàna, na “Loza Mahatsiravina Goavana” (“Meds Yeghern”), dia manoritsoritra ny faandringanana sy ny fanondranana Armeniàna Otômàna manodidina ny 1,5 tapitrisa tamin'ny 1915. Na dia eken'ny ankamaroan'ireo mpahay tantara aza fa fandripahana izany, dia mijanona ho adihevitra io filaza io, indrindra ao Tiorkia. Ankoatra ny fisalasalan'i Tiorkia sy ireo firenena hafa amin'ny fanekena ilay famonoana olona ho toy ny fandripahana, manazava ny manampahaizana malaza, Tom de Waal (en), fa ny teny hoe “fandripahana” dia matetika ampiasaina ho amin'ny tanjona ara-politika. Mampiasa an'io teny “fandripahana” io ny Global Voices satria ny ankamaroan'ireo mpahay tantara dia mifanaraka (en) amin'ny fiantsoana azy : ny fandripahana Armeniàna.